Ahoana ny fomba hananganana ny fampisehoana slide PowerPoint amin'ny varavarankely tokana ho an'ny hetsika virtoaly | Martech Zone
Rehefa manohy miasa any an-trano ny orinasa dia nitombo ny isan'ireo fivoriana virtoaly. Tena gaga aho tamin'ny isan'ny fivoriana izay ahitan'ny mpanolotra fandaharana fizarana fampisehoana PowerPoint eo amin'ny efijery. Tsy manalavitra ny tenako amin'ity koa aho… Nandinika fotoana vitsivitsy teny an-dàlana aho ary nanemotra ny fanombohana webinar iray noho ny olana napetrako.
Ny toerana iray tanteraka, azoko antoka fa apetraka sy voatahiry isaky ny fampisehoana an-tserasera ataoko ny fahaizana mandefa ilay PowerPoint fampisehoana amin'ny varavarankely fa tsy ny toerana misy anao Natolotry ny mpandahateny iray izay mety hiteraka korontana… indrindra raha miasa amin'ny efijery marobe ianao. Mety hanafina ny fivezivezena rindrambaiko tena izy sy ny fisidinan'ny varavarankely amin'ny efijery samihafa… ary mampikorontana ny manodidina rehetra
PowerPoint dia manana mahafinaritra… nefa sarotra ny mahita… fametrahana toerana ahafahanao manana ny anao Slide Show misokatra amin'ny varavarankely tsirairay fa tsy izany. Ity toerana ity dia ahafahanao manokatra mora foana ny fampisehoana amin'ny maody Slide Show, saingy ao amina varavarankely tokana izay mora zaraina ao anatin'ny Zoom na webinar amin'ny Internet na rindrambaiko fihaonana hafa ary mifehy mora foana ny fampisehoana ataonao amin'ny alàlan'ny bokotra totozy, lavitra na zana-tsipìkanao.
Fikirana fampisehoana slide slide PowerPoint
Raha manokatra ny fampisehoana nataonao ianao ho fanovana, misy menio Slide Show ao amin'ny fitetezana voalohany. Te-tsindrio Slide Show ianao:
Rehefa tsindrio Set Up Slide Show ianao dia homena safidy hananganana ilay Slide Show amin'ny varavarankely tsirairay. Zahao ity safidy ity, kitiho OK… ary Tehirizo ny fampisehoana nataonao. Ny farany dia mety ho ny dingana lehibe indrindra raha manomana ianao ary hanokatra ny fampisehoana hataonao rehefa manomboka ny webinar. Raha tsy tahirinao amin'ny alàlan'ny fanovana dia alefa any amin'ny maody Speaker ny fampisehoana.
Ity fampisehoana ity amin'ny ohatra nasehoko dia taranja nomerika novokariko niaraka tamin'ny Butler University izay ampiasaina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ankehitriny hampiofanana ny ekipa ao Roche. Nanao atrikasa an-tserasera tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny Zoom izahay ary nampiditra ny efitranon'i Zoom, Jamboards ho an'ny hetsika, ary zaraina. Noho io antony io dia nilaiko isaky ny santimetatra ny efijery telo mba hahafahako mijery ireo efitrano, ireo fotoam-pivoriana Jamboard, ny lahatsarin'ireo mpanatrika, ireo fotoam-piresahana ary koa ny fampisehoana. Raha nanokatra ny PowerPoint tamin'ny maody Speaker aho dia ho very ny varavarankely 2 fa ilay Slide Show fotsiny… ary angamba nanafina varavarankely nilaina maromaro tao aoriany.
Soso-kevitra Pro: Tehirizo amin'ny alàlan'ny modely virtoaly voazara ity fametrahana ity
Raha namorona modely Master Slide Show ho an'ny fikambanananao ianao, dia tena mamporisika anao hitahiry ny môdely indroa… ny iray ho an'ny maody Speaker ary ny iray ho an'ny maody virtoaly izay ahafahan'ny fikirana napetraka. Amin'izany fomba izany, rehefa manomana ny fampisehoana virtoaly ny ekipanao dia tsy mila mitady an'io toe-javatra io izy ireo. Halefa ho azy izy io rehefa mamorona sy mitahiry ilay fampisehoana. Rehefa manomboka ny fampisehoana dia hisokatra hatrany amin'ny varavarankely tsirairay izy!
Keynote: Milalaova ny fampisehoana amin'ny Window
Ahoana ny Keynote? Keynote raha ny marina dia manana milalao eo am-baravarankely safidy izay karazana mahafinaritra. Raha tsindrio ny Play amin'ny Navigation voalohany dia hahita safidy iray ianao hilalao fotsiny ilay Fampisehoana sary eo am-baravarankely fa tsy efijery feno. Toa tsy izany no toerana azo tehirizina miaraka amina fampisehoana.
Etsy andaniny… raha tsikaritrareo fa samy mampiasa ny Slide Show sy ny fijerena sary mihetsika ato amin'ity lahatsoratra ity aho dia satria ny Microsoft dia miresaka famelabelaran-kevitra mandeha mivantana amin'ny alàlan'ny Slide Show iray, fa i Apple kosa dia miantso azy io ho Masotajohy. Aza manontany ahy hoe maninona ny sasany amin'ireo orinasa teknolojia ireo no tsy afaka mampiasa fiteny mitovy ihany… Nanoratra azy io tamin'ny fomba fanaon'izy ireo fotsiny aho.
Tags: Mihaona ny Googlemicrosoft powerpointMicrosoft Teamsfampisehoana an-tseraseraatrikasa an-tseraseraPower Pointmizara varavarankelyfizaranasary mihetsikafampisehoana slide show-tsaryhetsika virtoalywebinarvaravarankelyZoom